कला / मनाेरञ्जन Archives - News 88 Post
Category: कला / मनाेरञ्जन
अनि राजेश हमालले गाए ‘गाउँले ठिटो’ आममान्छेको कथा बोकेको गीत
March 13, 2022 N88LeaveaComment on अनि राजेश हमालले गाए ‘गाउँले ठिटो’ आममान्छेको कथा बोकेको गीत
काठमाडाैं । कथाले मागेको चरित्र अनुसार चलचित्रको पर्दामा अभिनय गर्दा गर्दै राजेश हमालको अनुहारको रंग फेरियो। जीवनको लय फेरियो। चेतना फेरियो। यही बाटोमा उनका रहर पनि फेरिए, उमेरसँगै छुटे। त्यही छुटेको एउटा रहर हो– गायन। जीवनको कुनै कालखण्डमा छुटेका तर अन्तरहृदयमा लुकेर बसेका रहरले कुनै दिन लय समात्छ भन्ने कुराको बलियो प्रमाण पनि हो हमालको […]
विवादमा प्रकाश सपुतको नयाँ गीत, युट्युबबाट हटाउन चेतावनी
March 12, 2022 N88LeaveaComment on विवादमा प्रकाश सपुतको नयाँ गीत, युट्युबबाट हटाउन चेतावनी
काठमाडाैं । प्रकाश सपुतको नयाँ गीत पीर रिलिज भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै विवादमा तानिएको छ । जनयुद्धमा सहभागी जनमुक्ति सेनाको दुःखमा आधारित भएर बनाइएको १६ मिनेट २५ सेकेण्ड लामो गीत यतिबेला युट्युबको ट्रेन्डिङमा रहेको छ । तर, गीत सार्वजनिक भएपछि माओवादी वृत्तबाट यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रसम्बद्ध अनेरास्ववियू क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष […]
कलाकार पल्पसा डंगोलको मिर्गौला प्रत्यारोपण
March 10, 2022 N88LeaveaComment on कलाकार पल्पसा डंगोलको मिर्गौला प्रत्यारोपण
काठमाडाैं । कलाकार पल्पसा डंगोल ‘चम्सुरी’को बुधबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । चिकित्सकहरुको टोलीको करिब ५ घण्टाको प्रयासबाट उनको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल भएको हो । चिकित्सकको टोलीमा प्राध्यापक डा.दिव्या सिंहको नेतृत्वमा प्रा.डा.उत्तमकुमार श्रेष्ठ, प्रा.डा. प्रेम ज्ञवाली, प्रा.डा. महेशराज सिग्देल, प्रा.डा.पवन बस्याल, प्रा.डा.भोजराज लुइँटेललगायत सहभागी थिए । उनलाई नजिकका आफन्त पर्ने अजु […]
२५ जना पूर्वमिस नेपालले गठन गरे क्लब, सामाजिक अभियान चलाउने
March 8, 2022 N88LeaveaComment on २५ जना पूर्वमिस नेपालले गठन गरे क्लब, सामाजिक अभियान चलाउने
काठमाडौं । पूर्वमिस नेपालहरुले सामाजिक अभियान सुरु गरेका छन् । हालसम्मका २५ पूर्वमिस नेपालहरुले ‘फर्मर मिस नेपाल विनर क्लब’ गठन गरी सामाजिक अभियान सुरु गरेका हुन् । यसमा मानसिक स्वास्थ्यदेखि विपन्नलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेसम्मको योजना उनीहरुले अघि सारेका छन् । सबै पूर्वमिस नेपालहरुलाई एउटै छातामा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको यो क्लबले सामाजिक कार्यमा सक्रियता […]